मिस यू सिस, ब्याड्ली !
मंगलबार, १४ भदौ, २०७३
लामै समय भएको थियो, सम्पर्क नभएको । कहिले–कहिले ‘फेसबुक’मा भेटिए पनि दुई महिनाजति भएको थियो होला निर्धक्क खुल्न÷बोल्न नपाएको । पढाइ–काम, काम–पढाइ । दुई जना मात्रै भए पनि घरव्यवहारले थिचिरहने । सधैंको हतारो, भेटेको बेला बोल्न पनि समयले नै छेकिदिने ।
म यहाँ (विदेश) आएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । कुनै सम्बन्ध नै नभएजसरी छोडेर आएँ, त्यो पनि बिहे नै गरेर । त्यति धेरै आत्मीय सम्बन्ध यति छिट्टै छोडेर परदेशिएली भनेर कल्पनासम्म थिएन होला । ‘हतारमा निर्णय नगर’ उसले बारम्बार भनी । समयले जता डो¥यायो म त्यतै बगेँ । भेलमा बगेका मूढाझैं । कसैसँग गुनासो गरिनँ, आफैंसँग पनि ।
दिदी हो ऊ । तर, व्यवहारमा त्योभन्दा धेरै माथि, आमाझैं । आमालाई ‘बुबाको स्वास्नी’पट्टिबाट कहिल्यै नसोचेझैं ऊ पनि कुनै दिन ‘भिनाजूको स्वास्नी’ होली भनेर मैले कहिल्यै सोचिन । सायद उसले पनि ‘ज्वाइँको स्वास्नी’ होली भनेर कहिल्यै सोचिन होला । म असमयमै ‘बहिनी’ कम, ‘ज्वाइँकी स्वास्नी’ बढी हुन पुगेँ । दुई वर्षको मात्रै अन्तर छ हामीमा । तर, उसले कहिल्यै मलाई दुई वर्षको मात्रै अन्तर हो भनेर महसुस हुन दिइन । एउटै स्कुल पढ्यौं । पहिलो दिन उसकै हात समाएर स्कुल लैजादाँ आफू खुबै ठूलो मान्छे भएझैं तोते बोलीमा ‘नानू धेरै पढेर ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ है’ भनेकी थिई । मैले त्यसबेला खै के भने याद छैन । तोते बोलीमै ‘हुन्च’ भनेँ होला । लम्बेतान गाडीको लाइन छिचोलेर स्कुल जानुपर्दा ऊ आफूलाई ठूली नै भएको जस्तो गरेर हात समाउँथी । म झड्कारेर फुत्किन्थेँ । बुर्कुसी मार्थें ।
आज भेटियौं ‘स्काइप’मा । के भेटियौं भन्नु, एकअर्कामा रेटियौं भन्दा हुन्छ । निर्धक्क खुल्नुको आतुरता थियो । तर, सकिएन । राम्रोसँग एकअर्काको मुहार पनि हेर्न नसक्नेजस्ता भएछौं, पारपाचुके गरेका श्रीमान्–श्रीमतीजस्तै । ‘वेभक्याम’ तिर नहेरी केही शब्द मात्रै बोल्यौं । बाँकी सबै–सबै आँखा र त्यहाँबाट झर्ने तरलले बोल्यो । जति सम्हाल्न खोज्यो, त्यति नै कमजोर भइदिँदो रहेछ मन ! प्रविधिले नजिक ल्याइदिए पनि नजिक हुन सकेनौं । र, खुल्न पनि । सुँक्कसुँक्कका बीच बेस्सरी चिच्याउँदै औपचारिकता पनि नसाटी छुट्टियौं । धेरै कुरा गर्छु भन्ठानेकी थिएँ । तर, छेकिदियो आँसुले । सायद त्यस्तै भयो उसलाई पनि ।
दुवैले स्कुल सक्यौं, दुई वर्षको फरकमा । समयले जवान बनाउँदै लग्यो । झनै नजिक भयौं भावनामा । दिदी–बहिनीको सम्बन्धलाई समयले साथीजस्तै अझ त्योभन्दा पनि माथि उचालिदियो । भयौं एकअर्काको सुख–दुःख बुझ्ने सहृदयी । लुकाउनुपर्ने जति पनि लुकाउन नसक्ने भयौं । झरीपछिको आकाशझैं खुल्थ्यौं । ‘तिमेरु, एकअर्कालाई यति धेरै माया नगर’ मम्मी भन्नुहुन्थ्यो, ‘छोरी मान्छेको जात एक दिन छुट्टिनै पर्छ । त्यो बेला गाह्रो होला ।’ हामी एक स्वरमा भन्थ्यौं, ‘यो सम्बन्ध, यो घर छोडेर काहीं जाँदैनौं ।’ तर त्यो बचनमा मै प्रतिबद्ध हुन सकिनँ । हुन त ऊ पनि कसैलाई माया गर्थी । ‘उसैसँग जीवन बिताउँछु’ पनि भन्थी । ‘मैले त्यो सम्बन्ध बचाउन सकिनँ’ भन्दै एक दिन ऊ निस्फिक्री रोई, मेरै काखमा । मैले मात्रै कापाल सुमसुम्याइदिँदै आँसु पुछिदिएँ । सम्झाउने शब्द थिएनन् मसँग । प्रेमोत्कर्षमा जीवन अरुलाई नै सुम्पने निर्णय गरेपछि जन्मघर छोडें । र, देश पनि । अहिले सात समुन्द्रवारिपारि भएका छौं ।
उसलाई आज स्काइपमा भेट्दा कहिल्यै नभएजस्तो भयो । प्रसुति व्यथाले छटपटाइरहेकी महिला जस्तो । मुटु बोझिलो बन्यो । छाती ढुक्क फुल्यो । रिंगटा लाग्यो । यसअघि कहिल्यै यस्तो भएको थिएन । हतार–हतार काम सकाएर फर्किएकाले पनि होलाजस्तो लाग्यो । ‘दस मिनेटपछि टन्न कुरा गर्ने है पुन्टु’ ऊ ‘साइन आउट’ भई । मैले आफूलाई सामान्य बनाउन खोजें ।
तर सकिन । सौरभले कागती पानी ल्याइदियो । एक घुट्कोमै सकाएँ । तर, पनि तिख्र्रा नमरेजस्तो भइरह्यो । ‘बेड’मा पल्टिएँ । आँखैमा आएर टाँस्सियो उसको मुहार । सिनेमाका रिलझैं घुमे बाल्यावस्थादेखि नछुट्टिँदासम्म एक–एक क्षण । डाँको छाडेर नै रुन आयो, रोएँ । सौरभले सान्त्वना दिदै आँसु पुछिदिन खोज्यो । सम्झनाको आँसु बगोस् भनेर मैले पुछ्न दिइन।
म टाढा भएयता उसले ‘फेसबुक वाल’मा मप्रतिको माया असरल्ल पोखिरही । म भने चाहेर पनि सक्दिनथें । काम–पढाइ र पढाइ–काम कामका कारण । ‘मेरी महारानी’ भन्दै ऊ बच्चाबेलाका फोटोहरु ‘ट्याग’ गरिरहन्थी । देख्नेबित्तिकै आँखा रसाउँथे । आँसु पनि आफ्नो माटोमा नखस्ने ठाउँमा ऊ मलाई अक्सर रुवाइरहन्थी । तर, पनि मैले कहिल्यै ‘त्यसो नगर, म आँसु रोक्नै सक्दिनँ’ भनिनँ । उसको असीम प्रेमप्रति आफ्नै आँसु फिक्काजस्तै लाग्यो ।
‘मिसिङ यू प्यारी सो मच, फिलिङ सो एलोन । गड ब्लेस यू माई चाइल्ड । लट्स अफ लभ एण्ड माइ ब्लेसिङ ।’ उसले असंख्य पटक यस्तै लेखी । दसैं, तिहार, तीज प्रत्येक पर्वमा ‘तिमीबिना खल्लो भयो, मैले त सपिङ पनि गरिनँ’ भन्थी । दसैंको फूलपातीको अघिल्लो दिन मेसेज बक्समा ‘नानू, तिमी के गर्दै छौ ? सपिङ जाने भनेको छिट्टै आऊ ।’ आँखैभित्र आँसु लुकाएर घण्टौं रोएको थिएँ त्यसदिन ।
बाचाअनुसार नै दस मिनेटमै ऊ ‘लगइन’ भई । तर, कुरा गर्ने हिम्मतै भएन । मलिनो स्वर हुँदै फेरि सुरु भयो दुईतर्फी रुवाइ । लाग्थ्यो, को लामो समयसम्म रुने भन्नेमा प्रतिस्पर्धामा छौं हामी । फेरि आँसुले रोकिदिए शब्दहरु । शब्दविहीन रहँदारहँदै विगत सम्झें । पानीपोखरी सम्झें, जहाँ हामी हुर्कियौं । टिचिङ हस्पिटल सम्झें, जहाँ हामी छोइडुम खेल्थ्याैं । फूलबारीमा सजिएका फूल चोथ्र्यौं । एक दिन झण्डै पाले दाइको फेला नपरेको ! सम्झें सँगै काटेका गल्ली र सडकहरु । आइसक्रिम र पानीपुरी । उन्मत्त खुसी भएको क्षण, निमेषमै रिसाएको क्षण ।
एक सासमै बिर्सनु पर्ने कुरा पनि सबै सम्झें । र, सम्झिएँ अहिलेको भौतिक दूरी । अनि फेरि सम्झिएँ मबिनाकी उनी र यो पहिलो विदेश यात्रा ! चरी हुँदो हुँ त पखेटा फिजाउँदै छिनमै उनीसम्म पुग्थें होला । तर,... । झ्याप्प अँगालो हालेर रोइदिउँजस्तो लाग्यो । पानी परिरहेको सडकमा हुन्थें त रोइदिन्थें । आँसु त लुकाइदिन्थ्यो, बर्सिएको पानीले । मन हो किन मान्थ्यो र ! सुँक्क गरे, सँगै खस्यो दुई आँखाबाट एक–एक थोपा आँसु । हुन त आँसु पानीजस्तै हो । तर, यसमा पानी कम, भावना बढी हुँदोरहेछ । पछि सौरभ भन्दै थियो, ‘तिमीभन्दा बढी दिदी रुनुभयो ।’ आँसुले फेरि एक पटक ‘रिन्यू’ ग¥यौं पुराना सम्बन्ध । र, नाप्यौं त्यसभित्रका गहिराइ ।
ऊ दिदीबाट ‘भिनाजूको स्वास्नी’ बन्ने दिन फेरि यसरी नै आँसुबीच सम्बन्धको गहिराइ नापिएला । त्यो दिन छिट्टै आउँदै छ । सायद मंसिरमै । त्यसउता सम्झनाले यति धेरै नचिमोट्ला । बिहान फेसबुक ‘लगइन’ गरेपछि देखें, ‘आइ मिस यू नानू, नाउ आइ कुड नट टक टू यू मोर । विकज ...।’ मध्यरातको म्यासेज रहेछ ।
‘यू मेकिङ मि स्याड बाई कमिङ सम ह्वाट नियर मि... आइ नो योर्स टियर्स स्पोक यू, मिस्ड मि अ लट ह्वेइन यू आर सपिङ, इन्जिोयिङ इन ब्यूटिफूल ...। थ्याङ्स फर टक... नेभर सेड यू डिडी... वान से...आइ मिस यू दिज्यू ।’ मैले रिप्लाइ गरें ।
उसको आँसु मध्यरातमा र मेरो एकाबिहानै शब्दमा बदलियो, ‘मिस यू सिस, ब्याड्ली !’